के हो शालिग्राम जुन मोदीलाई उपहार दिइयो ? – Medianp
के हो शालिग्राम जुन मोदीलाई उपहार दिइयो ?
Media NPप्रकाशित मिति: शनिबार, बैशाख २९, २०७५०९:३६0
काठमाडौँ, २९ वैशाख । नेपालको राजकीय भ्रमणमा रहेका भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई कालिगण्डकी नदीको शालिग्राम उपहार दिइएको छ । मुस्ताङमा रहेको पवित्र धार्मिकस्थ मुक्तिनाथ दर्शनका लागि पुगेका मोदीलाई मुक्तिनाथको दर्शनपछि मुस्ताङको बाह्रगाउँ मुक्तिक्षेत्र गाउँपालिकाका अध्यक्ष र जिल्ला समन्वय समितिका सभापतिले संयुक्तरुपमा कालिगण्डकी नदीको शालिग्राम उपहा दिन लागेका हन् ।
के हो शालिग्राम ?
शालिग्राम विशेष गरी धार्मिक रुपले भगवान विष्णुको प्रतिकका रुपमा लिइन्छ । यसलाई शालाग्राम, शालिग्राम, शालिग्रामा र सालाग्राम पनि भनिन्छ । यो शालिग्राम नेपालको कालिगण्डकी नदीको किनारामा पाइने कालो रंगको पत्थरको मूर्ति हो । जुन कलात्मक रुपमा गोलो आकारमा चक्र जस्तो कँुदिएको जस्तो हुन्छ ।
शालिग्राम सेतो, निलो रंगमा पनि हुन्छ तर यो निक्कै दूर्लभ मानिन्छ । धार्मिक रुपमा शालिग्राममा भएको बुट्टालाई भगवान विष्णुको चक्रको रुपमा लिइन्छ । कालो ढुंगामा गोलो आकारमा पुरा चक्र जसरी कुदिएको छ भने त्यसलाई भगवान विष्णुको सुदर्शन चक्र भनिने गरिन्छ ।
शालिग्राममा भगवानको सम्पूर्ण अवतारमा हुने गरेको धार्मिक विश्वस छ । यदी शालिग्राममा माछाको आकार छ भने त्यसलाई भगवान विष्णुको मत्स्य अवतार मानिन्छ भने कछुवाको आकारमा भएको शालिग्रामलाई भगवान विष्णुको कछुवा रुप कुर्म अवतारको रुपमा लिइन्छ ।
के नेयमार बार्सिलोना फर्कँदैछन् ? यसो भन्छन्, इनिएस्टा
सर्ट मुभिकी नायिकासँग शारीरिक सम्बन्धकाे भिडियाे सार्वजनिक भएपछि…
कारभित्रै प्रिया प्रकाश र रोशनको यस्तो मस्ती , तस्विर भयो भाइरल !